လူမီနီယမ်လှုပ်လှုပ်ရွရွကြေးနန်း Lock ကိုဦး Channel ကို, ဖန်လုံအိမ်နွေ Lock ကိုပရိုဖိုင်း - တရုတ်ဘေဂျင်း Fenglong ဖန်လုံအိမ်
Glass ကိုဖန်လုံအိမ်များအတွက် 3GG မော်တော်ဂီယာအုံဂီယာမော်တော် ...
top-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ကုန်ပစ္စည်း! ဘေးနံရံလက်စွဲစာအုပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Reeler လက် ...
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုရှင်းလင်းရန်ပလတ်စတစ်ရုပ်ရှင်, Polyethylene ကိုဖုံးလွှမ်း ...
လူမီနီယမ်လှုပ်လှုပ်ရွရွကြေးနန်း Lock ကိုဦး Channel ကို, ဖန်လုံအိမ် Spri ...
လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုး, ဇီ coated က Non-သွပ်ရည်စိမ်နွေ, အပြည့်အဝ PVC ...
လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုး, နွေဦး, အပြည့်အဝ PVC Zigza coated အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး ...
လူမီနီယမ်လှုပ်လှုပ်ရွရွကြေးနန်း Lock ကိုဦး Channel ကို, ဖန်လုံအိမ်နွေ Lock ကိုကိုယ်ရေးဖိုင်
လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုး, ချေးခုခံ၏ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်LOCKUP®လူမီနီယမ် Lock ကို Channel ကို။ သံချေးနဲ့ Maintenance-အခမဲ့လူမီနီယမ်အလွိုင်းများ လုပ်. , ဤအရပျ၌အ Poly ရုပ်ရှင်နဲ့ရိပ်အထည်နှစ်ဦးစလုံးကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ VINIPET®လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ကိုင်။
ဆိပ်ကမ်း: Xingang, တရုတ်
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, L ကို A / C, D ကို / A, D ကို / P ကို,
လူမီနီယမ်လှုပ်လှုပ်ရွရွကြေးနန်း Channel ကိုကဘာလဲ?
ကောင်းမွန်သောပုံပန်းသဏ္ဍာန်သံချေးနဲ့ Maintenance အခမဲ့လူမီနီယမ်အလွိုင်း, အလင်းအလေးချိန်, အနိမျ့ Density ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးများနှင့် Wirelock Channel ကိုသင့်ရဲ့ဖန်လုံအိမ်ဖွဲ့စည်းပုံရန်သင့် polyethylene ရုပ်ရှင် install လုပ်မယ့်မြန်ဆန်လွယ်ကူသော, အဆင်ပြေပြေနဲ့လုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါLockup®လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးလိုင်းကိုအလွယ်တကူနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ပေါက်တွေကို pre-တူးသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်မိမိကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ်ဖန်လုံအိမ် frame ကိုမှထည့်သွင်း screw နှစ်ခုနှိပ်။ channel ကို install လုပ်ထားသင့်ဖန်လုံအိမ်ကျော် polyethylene ရုပ်ရှင် drape ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ရုံ Poly ရုပ်ရှင်နှင့် "လှုပ်လှုပ်ရွရွ" ဟုဝါယာကြိုးတက်ဆန့်ရန်နှင့်ချဦးသို့မဟုတ် C အမျိုးအစား Channel ကိုအတွက်ဖန်လုံအိမ်ပလပ်စတစ်သော့ခတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက် re-ဆန့်သည့် polyethylene ရုပ်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါက, လည်းဖယ်ရှားပစ်ရန်စူပါလွယ်ကူပါတယ်။ ပဲ "လှုပ်လှုပ်ရွရွ" နွေဦးဝါယာကြိုးတက်လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ installed သောဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းမှာဆင်းရန်။
ရုပ်ရှင်အပေါ်ဘယ်အချိန်မှာလေတိုက်လုပ်ရပ်များ, အင်အားα <βလျှင်, ရုပ်သံလိုင်းသော့ခတ်မည်, အင်အားသီအိုရီအတိုင်း, လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးမှလွှဲပြောင်းဖြစ်ပါတယ်
သည့်လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးများနှင့်လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးအောက်သို့ရွှေ့မည်; α> βလျှင်, လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးလေတိုက်-ခုခံတွန်းလှန်LOCKUP®လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးရုပ်သံလိုင်း upwards.When ရွှေ့မည်α <β, ပိုလေတိုက်တင်, အောက်သို့သွားကြဖို့ပိုအင်အားအဖြစ်, လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာပြိုကျရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဘုံအဘို့, ဆန့်ကျင်တွင်နှင့်ဦးလှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုးရုပ်သံလိုင်းပုံဖော်, α> βဒါကြောင့်ပိုလေတိုက်တင်, ပိုအင်အားသုံးအထက်သို့သွားကြဖို့။ ဒါဟာပြိုကျရန်ခဲယဉ်းသည်။
Item: လှုပ်လှုပ်ရွရွကြေးနန်း Channel ကို
တာရှည်လျှင် PCs:3မီတာ /4သန်းတန် /6လ
မူလအစ၏ Place: တရုတ်၏ဘေဂျင်း
MOQ: 5,000pcs သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြ
1, တဲ့ professional, ချောအသွင်အပြင်တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့။
2, ပိုပြီး 20 Mil ထက် Poly သို့မဟုတ်ရိပ်ကြော့ကှငျးပစ္စည်းကျင်းပ။
3, High-အရည်အသွေး, သံချေးများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့
အမျိုးမျိုးသောအရှည်များအတွက်ရရှိနိုင် 5, (3 မီတာ,4သန်းတန်သို့မဟုတ်6လ)
ထုပ်ပိုး & Delivery:
စံတင်ပို့အထုပ်: 30pcs / အထုပ်
အလေးချိန်နှင့်တဦးတည်းစံအထုပ်အဘို့အ Volume ကို:
ဥပမာ KCL-UY-4000, L ကို = 4000, L ကို = 4000mm, 17.60kg / ပက်ကေ့, အတှဲ 4000mm ဖြစ်ပါတယ် * 100mm * 70m
LCL (ကွန်တိန်နာဝန်ထက်လျော့နည်း) သို့မဟုတ် FCL (အပြည့်အဝကွန်တိန်နာဝန်)
ယခင်: Swedged လှုပ်လှုပ်ရွရွကြေးနန်း Lock ကို Channel ကို, ဖန်လုံအိမ်နွေ Lock ကိုကိုယ်ရေးဖိုင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
နောက်တစ်ခု: ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုရှင်းလင်းရန်ပလတ်စတစ်ရုပ်ရှင်, Polyethylene ဖုံးလွှမ်းခရမ်းလွန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, Crystal Clear ကို, Long-ဘဝ
ပုံစံ specification ပစ္စည်း အကျယ် (မီလီမီတာ) အမြင့် (မီလီမီတာ) အထူ (မီလီမီတာ) အရှည် / pcsMeter
KCL-UY (ဓါတ်တိုး) သာမန် လူမီနီယမ် 30 11 0,803မီတာ /4သန်းတန် /6လ
KCL-ဦး (non-ဓါတ်တိုး) သာမန် လူမီနီယမ် 30 11 0,803မီတာ /4သန်းတန် /6လ
KFA-4Y (ဓါတ်တိုး) သာမန် လူမီနီယမ် 31,5 14.8 1,403မီတာ /4သန်းတန် /6လ
KFA-4 (non-ဓါတ်တိုး) သာမန် လူမီနီယမ် 31,5 14.8 1,403မီတာ /4သန်းတန် /6လ
ဤသည်Lockup®လူမီနီယမ်ဖန်လုံအိမ်ဦး Channel ကိုကျယ်ပြန့်သင့်ရဲ့ဖန်လုံအိမ်မှ Poly ရုပ်ရှင်နှင့် / သို့မဟုတ်အရိပ်အထည်စွဲစေရန်အသုံးပြုသည်။
လှုပ်လှုပ်ရွရွဝါယာကြိုး, non-သွပ်ရည်စိမ်နွေ, အပြည့်အဝ PVC အင်္ကျီကို ...